सांसदले नै पत्रकारलाई अपशब्द प्रयोग गरेपछि…….! – Enayanepal.com
सांसदले नै पत्रकारलाई अपशब्द प्रयोग गरेपछि…….!
२०७६, २४ चैत्र सोमबार मा प्रकाशित
सुर्खेतमा एकैदिन दुईजना पत्रकारमाथी दुर्व्यवहार भएको घटनाप्रती पत्रकार महासंघ सुर्खेतले आफ्नो गम्भीर ध्यानआर्षण भएको जनाएको छ।
महासंघले आज एक विज्ञप्ति जारीगर्दै यसरी समाचार संकलनको क्रममा रहेका पत्रकार माथि भएको घटनाप्रति निन्दा र भत्सर्ना गरेको छ। महासंघले नागरिक दैनिक कर्णालीका प्रमुख नगेन्द्र उपाध्याय र जागरण एफएम सुर्खेतमा पत्रकार नन्द कठायत माथी भएको दुर्व्यवहार भत्सना गरेको हो।
कोरोना भाईरसको महामारीको समयमा सरकारले गरेको लकडाउनको उल्लघन जिम्मेवार निकायबाटै भएको भन्दै सोध्पुछगर्दा प्रदेशसभा सदस्य दानसिंह परियारले पत्रकार उपाध्याायलार्ई दुर्व्यवहार गरेका माहासंघले जनाएको छ। लकडाउनको समयमा सरकारी सवारी साधनको दुरपययोग गरेको बिषमा प्रतिकृया लिन खोज्दा सदस्य परियारले अस्लिल शब्द प्रयोग गर्दै गालीगलौज गरेका हुन।
पत्रकारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक समाचार संकलन र समाचार सम्प्रेषणको अधिकार हुदाँहुदै पनि जिम्मेवार निकायबाटै दुर्व्यवहार हुन प्रेसमाथी ठाडो हस्तक्षेप भएको माहासंका सचिव पुरीको भनाइ छ। यसैबिच अर्का पत्रकार कठायतलाई समाचार प्रशारणको लागी कार्यालय जादैगर्दा प्रहरीले हातपात गरेको जनार्इएको छ।
यो संकटको घडीमा जोखिम मोलेर नागरिकलार्इ सुचना प्रवाहका लागी खटिएका पत्रकारमाथी दुर्व्यवहार हुनु दुखःद भएको सचिव पुरीको भनार्इ छ। महासंघले पत्रकारमाथी दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तीलार्इ तत्काल कारवाही गर्न स्थानिय प्रशासनको माग गरेको छ।